Vaovao - fanoherana ny fihorakorahana Downhole ary ny vahaolana avo lenta avo lenta
Ny fitaovana Downhole dia mitaky peratra slip mba hamindrana angovo sy angon-drakitra ary hanafoanana ny fanodikodinam-tariby sy ny fametahana amin'ny tontolon'ny fitrandrahana mafy indrindra. AOOD amin'ny maha-mpamorona sy mpanamboatra peratra slip elatra azy, mifantoka hatrany amin'ny fangatahana farany fitaovana fampitrandrahana downhole ho an'ny peratra slip, dia nahomby tamin'ny fanoherana ny hovitrovitra avo lenta, ny fiakaran'ny maripana ary ny fivorian'ny peratra avo lenta ho an'ny MWD (fandrefesana mandritra ny fandavahana ) rafitra sy fampiharana indostrialy mari-pana avo lenta.
Ny ankamaroan'ny peratra kapaoty AOOD ampiasaina amin'ny fitaovana fandavahana dowohole dia noforonina namboarina, ampy hanoherana ny hatairana tampoka, ny hovitrovitra avo, ny hafanana ambony ary ny tontolon'ny gazety avo. Ny mari-pana miasa hatramin'ny 260 ° C sy MTBF (Fotoana anelanelan'ny tsy fahombiazana) hatramin'ny revolisiona 60 tapitrisa. Mora ny manangona sy misintona, azo ampiarahana amin'ny hafanana avo sy ny fanapaha-kevitra avo lenta ary ny motera.
Raha mila fanampiana ianao momba ny peratra slip ao amin'ny famolavolana fitaovana fandavahana downhole dia aza misalasala mifandray sales@aoodtech.com.
Ny fitaovana Downhole dia mitaky peratra slip mba hamindrana angovo sy angon-drakitra ary hanafoanana ny fanodikodinam-tariby sy ny fametahana amin'ny tontolo henjana mafy indrindra. AOOD amin'ny maha-mpamolavola sy mpanamboatra peratra slip elatra azy, mifantoka hatrany amin'ny fangatahana fitaovana farany fandavahana downhole ho an'ny peratra slip, dia nahomby tamina fahombiazana avo ...